पाउने भए पुरुषले पनि एकल भत्ता।महिनामा कति पाइने भयो? थाहा पाईराखौ | Butwal Dainik
पाउने भए पुरुषले पनि एकल भत्ता।महिनामा कति पाइने भयो? थाहा पाईराखौ
२८३ पटक पढिएको
गुठिचौर गाउँ पालिकाले सबै वडाका एकल पुरुषलाई विदुर भत्ता दिने भएको छ । गाउँपालिकाले ४१ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका एकल पुरुषलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्ष देखि सुरु गरिएको कार्यक्रमका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘रकम अपुग भए अन्य शीर्षकबाट उक्त भत्ता उपलब्ध गराइनेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले भने, ‘विदुर पुरुषहरूलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएको देखिएपछि यो निर्णय लिएका हौं ।’
गाउँपालिकाले विदुर भत्ता दिने निर्णयले उत्साह मिलेको स्थानीय कमानसिंह विकले बताए। ‘समाजमा एकल पुरुष पनि साहराविहीन छौं,’ उनले भने,‘यो भत्ताले थोरै भए पनि राहत दिने विश्वास छ।’ छोराबुहारीले घरबाट निकालेपछि उनले ७ वर्षदेखि आफन्तको घरमा बसेर मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।सरकारले ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आए पनि एकल पुरुषलाई नदिँदा उनीहरू सहारा विहीन बनेपछि भत्ता दिन बजेट छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन देव कोटाले बताए । अहिले गाउँपालिका ले एकल पुरुषहरूको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ ।
यो पनि:डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी पेटिएम चलाउने फिनटेक स्टार्टअप कम्पनी वन९७ कम्युनिकेसन्स लि.को आइपिओको लिस्टिङ भएको छ। लिस्टिङ कार्यक्रममा यसका संस्थापक तथा सीइओ विजय शेखर शर्मा भावुक भए। उनका आँखा बाट आँसु आए । कम्पनीलाई यो उचाइसम्म पुर्याउने विजय शेखर वर्माको संघर्ष र सफलता धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।
विजय शेखर शर्माको अहिलेको कूल सम्पत्ति २.४ अर्ब डलर छ । उनले आफ्नो उमेर २७ वर्ष हुँदा महिनामा १० हजार रुपैयाँ कमाउँथे। यसकारण उनले बिहे गर्नको लागि केटी समेत पाएका थिएनन् । २०१७ मा डिजिटल भुक्तानी फर्म पेटिएमको स्थापना गरेका शर्माले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भने ‘२००४–०५ मा मेरा पिताले मलाई आफ्नो कम्पनी बन्द गरेर ३० हजार रुपैयाँ तलबमा जागिर गर्न भन्नुभयो ।’
शर्मा प्रशिक्षित इन्जिनियर थिए तर त्यतिबेला उनले एउटा सानो कम्पनीको माध्यमबाट मोबाइलका सामग्री बेच्थे । शर्माले भने ‘मैले महिनामा करिब १० हजार रुपैयाँ मात्रै कमाउँछु भन्ने थाहा पाएपछि सम्भावित बे’हुलीका परिवारले हामीलाई कहिल्यै पनि फेरि फोन गर्दैनथे । म एक अयोग्य कुमार बनें ।’ अहिले भने शर्मा विवाहित छन् र उनका एक छोरा पनि छन् ।
४३ वर्षका विजयले गत हप्ता पेटिएमको २.५ अर्ब डलरको आइपिओको नेतृत्व गरे । उनको फिनटेक फर्म अहिले आधुनिक भारतको पहिचान बनेको छ। भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशको सानो सहरमा शिक्षक पिता र गृहिणी आमाको छोरा भएर जन्मेका विजय २०१७ मा भारतका सबैभन्दा कान्छा अर्बपति बनेका थिए ।